Torohevitra momba ny fangatahana fanokafana asa - Ellicott Dredges
Torohevitra amin'ny fampiharana
Nanapa-kevitra ianao fa te hangataka ny iray amin'ny toerana misokatra izahay, nefa ahoana no handehananao hanao fanokafana?
Ny fangatahana asa vaovao dia mety hahagaga, ary fanapahan-kevitra manova fiainana izay mety hisy fiatraikany amin'ny fahombiazanao amin'ny asa maharitra. Tianay ny manome torohevitra mahasoa momba ny fomba hahazoana antoka fa mety ho anao i Ellicott Dredges, ary ny fomba hanaovana izay fahatsapana tsara indrindra.
Mety amiko ve i Ellicott Dredges?
Sarobidy aminao ve ny soatoavintsika?
Ao anatin'ny faran'ny orinasanay ny soatoavina, ka eritrereto ny tenanao raha mifanaraka amin'ny antsika ny soatoavinao.
Ataovy fampiasa indrindra amin'ny tambajotra
Miresaha amin'ny namana, mpanoro hevitra ary fifandraisana izay miasa ho an'ny Ellicott Dredges na efa niara-niasa taminay taloha mba hahalalana bebe kokoa momba ny orinasanay, ary hanampy anao hamantatra raha izahay no orinasa ho anao.
Tianay ny fanamby - sa tsy izany?
Orinasa manerantany izahay miresaka ny sasany amin'ireo fanamby lehibe amin'ny fanovozana drakitra. Raha voatosika ianao, manolo-tena amin'ny fivoaran'ny tena manokana ary mitady asa sarotra, nefa manatanteraka, dia toy ny karazana olona izahay.
Ny fampiharana anao dia hivoaka miaraka amin'ny taratasy fandrakofana mandresy lahatra.
Mijerevazy araka ny tokony ho izy ary asongadino ny antony maha tonga lafatra anao io andraikitra io amin'izao fotoana izao amin'ny asanao. Ampiasao ny antsipiriany momba ny fihainoana asa hitarika anao amin'ny sehatra tokony hampiharihariana anao.
Aza matahotra ny mampiseho ny toetranao
Asehoy izay talentanao ary asongadino ireo fahaiza-manao sy traikefa azonao entina amin'ilay toerana ampiharinao. Ny resume lehibe dia tokony ampifanarahana amin'ny andraikitra ampiharinao. Hamarino tsara fa hanasongadinana ny zavatra niainanao mifandraika indrindra.
Ny fanaovanao indray dia tokony ho tsotra tsotra ny mamaky sy manaraka, miezaka hisoroka ny akrôma be loatra ary tazonina ho mazava sy mangarahara ny format.
Torohevitra momba ny dinidinika
Avereno jerena ny asa famoahana andraikitra ho an'ny andraikitra lehibe amin'ilay toerana. Fikarohana Ellicott Dredges ao amin'ny tranonkalantsika sy media sosialy, ao anatin'izany ny Facebook, Twitter, ary ny LinkedIn. Ho fanampin'izany, apetraho ny tenanao momba ny fivoarana sy ny fanamby atrehin'ny indostrianay ary miantoka fa fantatrao ny fepetra takian'ny andraikitra
Manomàna fanontaniana. Tokony hanana fanontaniana 3-4 farafahakeliny voaomana manodidina ny faritra tianao hahalala bebe kokoa ianao. Ny fanomanana fanontaniana manazava dia mampiseho fa nieritreritra ny anjara andraikitra ianao, ary manondro ny fahafantaranao ny fotoana mety
Henoy tsara tsara ilay fanontaniana
Makà fotoana na roa handaminana ny hevitrao alohan'ny hamalianao
Mangataha fanazava raha mila izany - alao antoka fa fantatrao tsara izay angatahin'ilay mpanontany
Miresaka mazava, manamaivana ny fampiasana jargon, manafoana ny banga
Miezaha hitana ny valin-teninao
Manandrama mampivoatra ny ohatrao - na dia tsara (ary indraindray ilaina) hampiasa ohatra mitovy mba hanasongadinana fifaninanana fototra samihafa